Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manatsara ny indostrian'ny fizahantany Atiu ny vokatra vaovao
Ny talen'ny varotra sy ny varotra manerantany Karla Eggelton ary ny Executive Executive Tony Fe'ao dia nihaona tamin'ny Atiu Tourism Industry Council (ATIC) mba hiresaka momba ny marketing sy ny drafitra ho avy.
Nanatevin-daharana azy ireo i Robert Skews avy ao amin'ny Turama House.
Namporisihina izy ireo hahita ny taranaka vaovao atiuans miditra amin'ny fizahan-tany - manome vokatra vaovao amin'ny Atiu ary koa manamafy orina ireo mpandraharaha fizahan-tany efa tafaorina.
Ny ekipa dia nanao fizahana ny tranokala ary niaina ny sasany amin'ireo vokatra vaovao misy eto amin'ny nosy.
Izy ireo koa dia nanao fivoriana niaraka tamin'ny ATIC, mpandray sy mpikarakara fizahan-tany, nandrisika ny indostria hanararaotra ny fahafaha-mivarotra amin'ny sehatra dizitaly.